यौ’नका’ण्डमा बेलौरी मालपोत प्रमुख प’रस्त्री’सँग रं’गेहात प’क्राउ ! – Life Nepali
यौ’नका’ण्डमा बेलौरी मालपोत प्रमुख प’रस्त्री’सँग रं’गेहात प’क्राउ !
कञ्चनपुर – बेलौरीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख एक विवाहित महिलाको घरबाट प’क्राउ परेका छन् । मालपोत कार्यालयका प्रमुख भोजबहादुर ऐडी प’रस्त्रीसँग आ’पत्तिज’नक अ’वस्थामा प’क्राउ परेका हुन्। प्रमुख ऐडीलाई एक ३४ वर्षीया महिलासँग आ’पत्तिज’नक अवस्थामा फेला पारिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीयको सूचनाका आधारमा प्रहरीले प्रमुख ऐडीलाई पक्राउ गरेको हो । त्यस्तै मालपोत प्रमुख ऐडीसहित उनलाई घरमा बोलाउने महिला पनि प’क्राउ परेकी छन् । ईलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रण बहादुर चन्दले महिलाका परिवारले दिएको उ’जुरीका आधारमा कार्यालय प्रमुख ऐडी र महिलालाई आ’पत्तिज’नक अ’वस्थामा प’क्राउ गरिएको बताए।
प्रमुख ऐडी र महिला बुधबार राति आ’पत्तिज’नक अ’वस्थामा प’क्राउ परेका हुन् । दुवै जनालाई हि’रासतमा राखेर सो’धपुछ गर्ने काम भइरहेको बताउँदै प्रहरी नीरिक्षक चन्दले उनीहरुका परिवारलाई पनि बोलाइएको जानकारी दिए। डडेल्धुरा स्थायी घर भएका मालपोत कार्यालय प्रमुख दशैँ विदामा घर गएका थिएनन्। उनका श्रीमती र एक छोरी छन् भने म’हिलाका दुई छोरा रहेको बताइएको छ। प्रहरीले मालपोत प्रमुख ऐडी र महिलाका परिवारलाई बोलाएर छलफल गरेपछि आवश्यक का’रबाही प्रक्रिया अ’गाडि बढाउने जनाएको छ ।
Previous स्वागतद्वारमा म’दिराको प्रचार !
Next देव गुरुङलाई सभामुख बनाउन दाहाल–नेपाल सहमत, सुरु भयो गृहकार्य